इसेवा र एमबैंकबीच डिजिटल भुक्तानीका लागि सम्झौता
काठमाण्डौ । डिजिटल भुक्तानीमा नेपालको पहिलो र अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा र सबैभन्दा बढी सहकारी संस्थालाई डिजिटल कारोबारमा जोड्ने एमबैंकबीच डिजिटल भुक्तानीका लागि सम्झौता भएको छ। सहकारी संस्थाहरुलाई पनि डिजिटल भुक्तानीमा जोड्ने उद्देश्यले दुई कम्पनीबीच सहकार्य भएको हो। सम्झौतासँगै एमबैंकले सेवा दिइरहेका ४५० बढी सहकारीमा...
इसेवाको चाडपर्व लक्षित अफर, आकर्षक पुरस्कारका साथै बैंकमा निःशुल्क रकम ट्रान्सफर
काठमाण्डौ। नेपालको पहिलो र अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले नेपालीको महान चाड दसैँ र तिहारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न किसिमका योजना सार्बजनिक गरेको छ। योजनाअनुसार इसेवामार्फत घटस्थापना देखि १० दिनसम्म कुनै पनि बैंकमा निःशुल्क रकम ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ। यस्तै बम्पर उपहारमा रु. १०० मा स्कुटर योजनामा एकजना भाग्शाली विजेताले...
काठमाण्डौ । बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सबैखाले सवारीसाधनको कर तथा राजस्व, सवारी दर्ता तथा नवीकरणको शुल्क अब इसेवामार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकार र इसेवाको सहकार्यमा सवारी साधनको कर, दर्ता र नवीकरण अनलाइनबाटै गर्न सकिने सेवाको सुरुआत भएको हो। योसँगै अब सवारीसाधनको कर तिर्न, सवारी दर्ता तथा नवीकरण तथा...
काठमाण्डौ । इसेवा मनि ट्रान्सफरले नेपालीको महान चाड दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै ‘चाड पर्वको बहार, दिनदिनै उपहार’ योजना सार्बजनिक गरेको छ। यस योजनाअन्तर्गत इसेवा मनि ट्रान्स्फरमार्फत रेमिट्यान्स् पठाउने व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना भाग्यशाली विजेताले हरेक दिन मिक्सर, हरेक हप्ता रेफ्रिजेरेटर, हरेक महिना स्मार्ट टीभी तथा...
इसेवाबाट नेपाल लाइफको बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा आकर्षक क्यासब्याक, हरेक महिना आइफोन १२ जित्न सकिने
काठमाण्डौ। नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवामार्फत नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा आकर्षक क्यासब्याक पाइने भएको छ। बीमितहरुले इसेवाबाट बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा बीमा शुल्कको ०.३५ प्रतिशतदेखि रु. १ हजारसम्मको आकर्षक क्यासब्याक पाउनेछन्। यस्तै बम्पर उपहारमा हरेक महिना आइफोन १२ जित्न सकिने �...
इसेवाले ल्यायो ‘शिक्षित युवा, संवृद्ध भविष्य’ योजना, ५०० बढी विद्यार्थीले छात्रवृति पाउने
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले एसईई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्दै ‘शिक्षत युवा, संवृद्ध भविष्य’ योजना सार्वजनिक गरेको छ। यस योजनामा ५०० भन्दा बढी विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृति प्राप्त गर्नेछन्। यो योजना आगामी भदौ १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। छात्रवृति विद्यार्थीले छानेका...
इसेवामार्फत हवाईजहाज टिकट काट्ने हरेक यात्रुले आकर्षक उपहार पाउने
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवामार्फत हवाईजहाज टिकट काट्दा हरेक यात्रुले आकर्षक उपहार जित्न सक्ने भएका छन्। नेपालको आन्तरिक उडानतर्फ कुनै पनि गन्तव्यमा जाने हवाई यात्रु यस योजनामा सहभागी हुनेछन्। यो योजना एक महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। यस योजनाअन्तरर्गत इसेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने हरेक यात्रुले अमार्या...
अब चिरायु राष्ट्रिय अस्पतालमा अनलाइनबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन सकिने
काठमाण्डौ । चिरायु राष्ट्रिय अस्पतालमा अनलाइनबाट अपोइन्टमेन्ट लिन सकिने सेवाको सुरुआत भएको छ। चिरायु राष्ट्रिय अस्पतालमा नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवाप्रदायक इसेवा र कोजेन्ट हेल्थको सहकार्यमा सुरु भएको ई–अपोइन्टमेन्ट प्लेट फर्ममा आबद्ध भएसँगै अनलाइन अपोइन्टमेन्ट सेवाको सुरुआत भएको हो। योसँगै अबदेखि चिरायुमा उपचार गर्न तथा...
फुडमाण्डुमा इसेवामार्फत भुक्तानी गर्दा रु. ३०० सम्म छुट पाइने
काठमाण्डौ । नेपालको सबैभन्दा पहिलो र ठूलो अनलाइन फुड डेलिभरी प्लेटफर्म फुडमाण्डू र नेपालको अग्रणी मोबाइल वालेट इसेवाबिच सहकार्य भएको छ। आफ्नो क्षेत्रका नेतृत्वदायी कम्पनीहरुबीचको यस समझदारीसँगै फुडमाण्डूका प्रयोगकर्ताहरुले मोबाइल वालेट इसेवामार्फत अर्डरमा भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। एक कार्यक्रमबीच फुडमाण्डू र इसेवाबीच...
इसेवा मनि ट्रान्सफर र कुवेत इन्डिया इन्टरनेसनल एक्सचेन्जबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता
काठमाण्डौ । डिजिटल रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा तीव्रगतिमा बजार विस्तार गरिरहको इसेवा मनी ट्रान्सफर र कुवेतलाई आधार बनाएर रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएको कुवेत इन्डिया इन्टरनेसनल एक्सचेन्जबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतासँगै कुवेतमा रहेका नेपालीहरुलाई रेमिट्यान्स पठाउन अझ सहज भएको छ। कुवेतमा रहेका नेपालीहरुले...
इसेवा मनि ट्रान्सफर र इन्टेल एक्सप्रेसबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता, अब युरोपबाट रकम पठाउन अझ सहज
काठमाण्डौ । रेमिट्यान्स बजारमा तीव्रगतिमा बजार विस्तार गरिरहको इसेवा मनि ट्रान्सफर र युरोपबाट रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जर्जियास्थित इन्टेल एक्सप्रेसबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ। सम्झौतासँगै युके, ग्रिस, साइप्रस, जर्जिया र इटलीमा रहेका नेपालीहरूलाई रेमिट्यान्स पठाउन अझ सहज भएको छ। यससँगै इन्टेल...
काठमाण्डौ। पछिल्ला दिनमा व्यापक रूपले रेमिट्यान्स बजार विस्तार गरिरहको इसेवा मनि ट्रान्सफर र युकेस्थित् सिफ्ट फाइनान्सियल सर्भिसबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतासँगै युके, युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्वका ५० भन्दा बढी देशहरुबाट सहजै रेमिट्यान्स पठाउन सकिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सिफ्ट मार्फत नेपालका कुनै पनि...
इसेवाबाटै अब कुनै पनि बैंकको किस्ता निःशुल्क भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो र अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाबाट अब कुनै पनि सदस्य बैंकको किस्ता निःशुल्क तिर्न सकिने भएको छ। यो सुविधा असार २२ गते मंगलबारदेखि असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ। यो अवधिमा इसेवाका कुनै पनि सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्दा अथवा रकम पठाउँदा कुनै पनि किसिमको शुल्क लाग्ने छैन। डिजिटल...
काठमाण्डौ। विश्वकै अग्रणी रेमिट्यान्स् सेवा प्रदायक तथा युरोनेट वल्र्डवाइड इंकको सब्सिडायरी कम्पनी रिया मनी ट्रान्सफर र एफवानसफ्टको भगिनी कम्पनी इसेवा मनी ट्रान्सफरबीच रेमिट्यान्स् भुक्तानी सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतासँगै नेपालीहरूले रियाको सञ्जालमा रहेका विश्वका १ सय ६० देशका ४ लाख ७५ हजारभन्दा धेरै स्थानहरूबाट सहजै इसेवा...
‘इसेवा भर्चुअल फिस्टा’ सुरु, १० हजार विद्यार्थीले निःशुल्क अनलाइनमार्फत भाग लिन पाउने
काठमाण्डौ । निषेधाज्ञाको अवधिमा विद्यार्थीको समयलाई आकर्षक तथा उत्पादक बनाउने उद्देश्यका साथ ‘इसेवा भर्चुअल फिस्टा’ आयोजना गरिएको छ। भर्चुअल प्लेटफर्मका माध्यमबाट मुलुकभरका करिब १० हजार विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यका साथ गत शुक्रबार (जेठ ७ गते) बाट यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यस भर्चुअल फिस्टामा स्नातक तथा...